မြားများ: သူ ကျွန်တော့်ကို
For thee, my own sweet sister,in thy heart
I know my self secure, as thou in mine;
we were and are..I am, even as thou art
Being who ne'er each other can resign;
We are entwin'd, Let death come slow or fast;
The tie which bound the first endures the last!....
Byron: George Gordon
ကျွန်တော် မမကို လက်ထပ် ပါရစေ လို့ ကျွန်တော်ပြောတော့ သူမ မျက်နှာ မည်သို့ နေမည်လဲ ကျွန်တော် မသိနိုင်ပါ..။ လောလောဆယ် ကျွန်တော်မြင်တွေ့နိုင်ခြင်း မရှိသော ကမ္ဘာ တဘက်ခြမ်းတွင် နေထိုင်နေသော သူမထံ ကျွန်တော့် စိတ် အလုံးစုံ ပုံအပ်လိုက်ပြီး နောက် ကျွန်တော့် အာရုံတွင် သူမ အမြဲတမ်း ရှိနေကြောင်းကိုတော့ ဝန်ခံချင်ပါသည်.။ သူမ မယုံတဝက်နှင့် ခပ်ဖွဖွ ပြုံးလိုက်မည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါသည်.။ ထိုသို့ ပြောမိစဉ်ခဏ ကျွန်တော့် ရင်တခုလုံး နိမ့်ဆင်းသွားသလို ခံစားမိကြောင်း သိလိုက်ရသည်.။
အကယ်၍ ချစ်ခြင်းထက် ပိုမိုလေးနက်သော စကား တခွန်းတလေမျှ ကျွန်တော် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့လျှင် သူမကို ပြောပြချင်ပါသည်.။ယခုတော့ ဤကဲ့သို့ပင် လက်ထပ်ပါရစေ ဟုသာ ကျွန်တော် ပြောနိုင်ခဲ့သည်.။ အမှန်တကယ်လည်း ချစ်ခြင်းထက် ပိုမို လေးနက်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် လူသားနှစ်ဦး၏ ဘဝ နှစ်ခု ပေါင်းစပ်ရန် အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော စကားတခွန်(လိုအပ်မှု) မှာ လက်ထပ်ခြင်း ဟု ယူဆမိသော ကျွန်တော့် အပေါ်ထင်မြင်ချက် မှားမပေးမိဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မည်။
လက်ထပ်တယ် ဆိုတာ လွယ်တယ် ထင်လို့လား ဟု မမ မေးတော့ တဒင်္ဂ တိတ်ဆိတ်သွားသလို ဖြစ်သွားပေမယ့် ယုံကြည်မှု အပြည့်ဖြင်ပင် မလွယ်ဘူး ဆိုတာ သိပေမယ့် မမ နဲ့ ကျွန်တော် ပေါင်းစပ်လို့ မရနိုင်လောက်အောင်ထိတော့ မခက်ပါဘူး ဟု ကျွန်တော် ပြန်ပြောလိုက်မိသည်.။ မမ နားလည်လိမ့်မည် ဟု ယူဆရပါသည်။ မမ ထင်တာ ပြောကြည့်မယ်နော်၊ ငွေကြေးနဲ့ အရာရာကို စံတိုင်း ဆုံးဖြတ်တာ မဟုတ်ပေမယ့် မင်းနဲ့ ငါနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ အတွက် ငွေကြေးကလည်း တခန်း တကဏ္ဍ ပါတာ အမှန်ပဲ၊ အဲဒီတော့ မင်း ဘယ်လို လုပ်မလဲ၊ မင်းကို စိန်ခေါ်စကား ငွေရေး ကြေးရေး စကား ပြောတာ မဟုတ်ဘူး ဟု မမ ပြောတော့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် နားလည် လက်ခံထားပါတယ် ဟု ကျွန်တော် ပြန်ပြောလိုက်မိသည်.။
မင်း သူ့ကို တကယ် လက်ထပ်မှာ လား ဟု ကိုအောင်ကိုလတ်က မေးတော့ သိပ်သေချာတာပေါ့ ဟု အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဖြေလိုက်ရင်း အဝေးမှိုင်း ညို့ ညို့ တောင်တန်းများဆီသို့ ဘာရယ် မဟုတ် ငေးမောကြည့်နေလိုက်မိသည်.။ ယခု အချိန်တွင် ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှ ခံစားချက် တစုံတရာကို သူနားလည်ကောင်း နားလည် လိမ့်မည် ဖြစ်သော်လည်း. တစိတ်တဒေသ အားဖြင့်သာ နားလည် နိုင်ပါလိမ့်မည်.။ အစ်ကိုလို တမျိုး သူငယ်ချင်းလို တဖုံ ချစ်ခင်ရသော ကိုအောင်ကိုလတ်သည် ကျွန်တော်၏ အကောင်းအဆိုး အားလုံးကို ယုံကြည်စွာ တိုင်ပင်၍ ရနိုင်သော မိတ်ဆွေ တယောက် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် တောမှ တက်လာပြီး ဒီမြို့ကလေးမှာ နေထိုင်စဉ် ကာလ တလျှောက်လုံး ကျွန်တော့်ဒဏ်ကို အခံရဆုံး သူမှာလည်း သူသာလျှင် ဖြစ်သည်.။
မင်း မမ ဆိုတာကို ငါ မမြင်ဘူး မတွေ့ဘူး မသိဖူးပေမယ့် မင်းလို တခါတလေ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား ဘာကိုမှ အလေးမထားချင်တဲ့ လူတယောက် အနေနဲ့ အဲဒီ မမ ဆိုတဲ့ မိန်းမ တယောက်နဲ့ ရေရှည်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဟု လက်ဖက်ရည်ခွက် ကိုရင်း ကိုအောင်ကိုလတ်က တွေးတွေးဆဆ မေးတော့ ကျွန်တော် ဘာမှ ပြန်မဖြေဖြစ်သေးဘဲ ဓာတ်ဘူးထဲမှ ရေနွေးကို အကြမ်း ပန်းကန်နှစ်လုံးထဲသို့ ငှဲ့ထည့်နေလိုက်မိသည်.။
နောက်ပြီး မင်းသူ့ကို ချစ်စကား ကြိုက်စကားတောင် မပြောရသေးဘဲ ခုလို လက်ထပ်ချင်တယလို့ ပြောတာကြီးက မင်းအနေနဲ့ အဆင့်ကျော်ရာ မကျဘူးလား..ဟု ပြုံးစစနဲ့ ဆက်ပြောသည်...။
ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောမယ် အစ်ကို ကျွန်တော် မိဘ အရ်ိပ်ကနေ ထွက်ခွာလာတဲ့ နောက်ပိုင်း မြို့ပြမှာ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေ တွေ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်.။ သင့်တင့်တဲ့ ငွေကြေးကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်မှုကို မရှာဖွေ နိုင်ခဲ့ဘူး အစ်ကို။ ကျွန်တော် တယောက်တည်း အထီးကျန် နေသလို အမြဲ ခံစားနေရတယ်.။ ဒါပေမယ့် မမနဲ့ တွေ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း သူ ကျွန်တော့် ကို နွေးထွေးမှု ပေးခဲ့တယ်.။ စကားတွေ အများကြီး ပြောခဲ့ကြပြီး ကျွန်တော်တော့ အပြန်အလှန် နားလည် မှု ရှိကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တာပဲ.။ ကျွန်တော် မမ အပေါ်ထားတဲ့ သံယောဇဉ်ဟာ တချို့လူတွေ ပြောပြော နေကြတဲ့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကား တခွန်းထက် ပိုလေးနက် လိမ့်မယ်.။မမ ဟာ ကျွန်တော့် ဘဝရဲ့ ထာဝရ လက်တွဲဖော်ဆိုတာ နားလည်လိုက်မိပြီး ခုလို မမ ကို ကျွန်တော် လက်ထပ်ဖို့ထိ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲ။ ကျွန်တော့် ဘက်ကတော့ ရာနှုန်းပြည့် သေချာနေတာပဲ လို့ ကျွန်တော် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောသမျှကို ကိုအောင်ကိုလတ်က စိတ်ပါ လက်ပါ ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နှင့် နားထောင်နေတာေ တွ့ရသည်.။
အင်း ဟုတ်ပါတယ်.။မင်းအနေနဲ့ သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့ စဉ်းစားတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက်ပိုင်း စားဝတ်နေရေး အတွက် လက်ဆုပ် လက်ကိုင် ပြစရာ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလေး တခုတော့ လုပ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး မင်း ခုလို ဝေလေလေ နေလို့ မရနိုင်တော့ဘူး.။ မြဲုိ့ပြမှာ ရပ်တည်ဖို့ရာက မင်းလည်း သိနေတာပဲ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူးဟု ပြောပြီး ကိုအောင်ကိုလတ်က ရေနွေးကြမ်း မော့ချရင်း မျိုမချသေးဘဲ ပါးစောင်မှာ ငုံထားလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို စူးစမ်းသလို ကြည့်နေသည်.။
သူနဲ့ ကျွန်တော် စတွေ့စဉ်က မင်း ငါ့ကို အချစ်အကြောင်းတွေ ငါ့ကို ချစ်စကား ကြိုက်စကား မပြောရဘူးဟု ကြိုတင် ပညတ်ထားသော မမကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မပြောမိဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်.။ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်နီးပါး စကားတွေ အများကြီး ပြောခဲ့ကြသည်.။ ထိုမှ တဆင့် သူမ အပေါ် သံယောဇဉ် ပိုမို တွယ်တာ လာခဲ့မိသည်.။ သို့သော် သူမကို ချစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော အကြောင်းတစုံတရာမှ ဖွင့်ဟ မပြောခဲ့မိပါ.။
ထိုရက်ပိုင်းကတော့ သူမ တော်တော် စိတ်ညစ်နေပုံရသည်။ ကျွန်တော့်ကိုပြောတိုင်းသေချင်တယ်ဆိုတာချည်းပဲပြောနေသည်။ သူမ၏ ရည်းစားနှင့် အဆင်မပြေဘူးဟုသာပြောသည်။ ဒီက ပြန်လျှင် သူမ စီးလာသော စက်ဘီး ကလေးနှင့်အတူ ယာဉ် တစီးစီး ရှေ့တွင် ထိုးခံလိုက်ပြီး သေကြောင်းကြံဖို့ အထိ စဉ်းစားသည်။ ကျွန်တော် တက်နိုင်သလောက် စကားတွေဖြေရှင်းပြနေမိသေးသည်။နောက် မနေ နိုင်တော့သည့်အဆုံး သူမ ဖုန်းကိုကောက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ မထင်ထားစွာပင်သူမ ငိုနေကြောင်းကျွန်တော်သိလိုက်ရသည်။ကမ္ဘာတစ်ဖက်ခြမ်းစီ ရောက်နေ၍ သူမ ကိုနှစ်သိမ့်မှုမပေးနိုင်သော်လည်းကျွန်တော်နားလည်ခံစားပေး၍ ရနေမိသည်။ ကျွန်တော့်ရင်ဘက် တခြမ်းလုံး (နှစ်လိုဖွယ်) အောင့်တက်လာပြီး သူမ ၏ တုန်ရီနေသော ငိုသံ ကြားတွင် ကျွန်တော့် ခန္ဒာ ကိုယ် ပြိုဆင်းသွားပြီဟုသာ ခံစားလိုက်မိသည်။ ထိုစဉ်ခဏ ၌ပင် သူမ အပေါ် ဖြစ်တည်နေသော သံယောဇာဉ် သည် မသေးလွန်းကြောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိပ်မိလာခဲ့သည်။
နင်က ကလေးပဲ၊ ကလေးဆိုတော့ ကလေး လို နေတာ အကောင်းဆုံးလို့ မမက ပြုံးစစနှင့် ပြောပြီး ကလေး မဟုတ်ရင်တောင် နင်က အရူးပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆက်ပြောပါသည်.။ ဟုတ်ပါပြီ၊ ကလေးရယ်၊ အရူးရယ်၊ သဘင်သည်ရယ် စကား မှန်တတ်တယ် ဆိုတော့ကာ ကျွန်တော် က နှစ်မျိုးဆိုတော့ နှစ်ဆတောင် ပိုမှန်ဦးမယ်လိူ့ ပြောတော့ မမ ရယ်ပါသည်.။ ကျွန်တော်ပါ လိုက်ရယ်လိုက်မိသည်.။ ထိုစဉ်ခဏ သူမ စိတ်လက်ကြည်သာ ပျော်ရွှင်နေပုံပါသည်.။ မမ ကျွန်တော် ညက အိပ်မက် အရှည်ကြီး မက်တယ်.။ ပြောပြရမလားဟု ကျွန်တော် ပြောတော့ အင်း ပြောကြည့်လေ နားထောင်မယ်ဟု ချစ်စရာကောင်းစွာ ပြုံးပြပြီး ပြောပါသည်.။
အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကို တစုံတယောက်က ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်လို့ လာပြောတယ် မမ။ အဲဒါ ကမ္ဘာကြီးထဲကနေ နောက်ဆုံး ထွက်ခွာမယ့် နောဧရဲ့ သင်္ဘော ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီကို လိုက်သွား ဆုိတော့ ကျွန်တော်အပြေးအလွှားပဲ သွားခဲ့မိတယ်.။ နောဧ သင်္ဘောပေါ်မှာ ဒီကမ္ဘာထဲက သတ္တဝါတွေ တော်တော်များများ ဖိုမ တစုံစီ တင်ထားတယ်ဗျ။ သင်္ဘောနားကို ရောက်တော့ ထွက်ခွာမယ့် ဆဲဆဲ ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါ ကျွန်တော်က တာဝန်ရှိတယ် ထင်တဲ့ တစုံတယောက် အနီးကို ကပ်သွားပြီး ကျွန်တော်လည်း လိုက်ပါရစေလို့ ပြောလိုက်မိတယ်.။ သူ ကျွန်တော့်ကို သေချာကြည့်ပြီး မင်းတယောက်တည်းဆို လိုက်လို့ မရဘူးလို့ ပြောတယ်.။ ဆက်ပြီးတော့ မင်းက လိုက်ချင်တယ်သာ ဆိုတယ်။ မင်းမှာ နံရိုးတချောင်း လိုနေတယ်တဲ့။
အဲဒါ သွားရှာလာခဲ့ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့၊ သင်္ဘော ထွက်တော့မယ် လို့ ပြောတယ်.။ ကျွန်တော့် စိတ်ထင်တော့ အိပ်မက်ထဲမှာ ကမ္ဘာပျက်နေပြီ ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော် သင်္ဘော အနီးကနေ ပြန်လှည့်ပြေးခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်မှာ လိုနေတဲ့ နံရိုးတချောင်း အရှာ ထွက်လာခဲ့မိတယ်.။ ကျွန်တော် ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်လာခဲ့ရင်း တော်တော်မောပန်းနေပြီ ထင်တာပဲ။ ခြေတွေလက်တွေ လှုပ်ရှား မရချင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်.။ ကျွန်တော် ရှာနေတဲ့ အရာကတော့ လုံးဝ ရှာမတွေ့သေးဘူး.။ တနေရာ အရောက်မှာတော့ ကျွန်တော် ဘာမှန်း မသိတဲ့ အရာကြီး တခုနဲ့ တိုက်မိပြီး ပစ်လဲ ကျသွားတာနဲ့ ကျွန်တော် အိပ်ယာက လန့်နိုးလာခဲ့တော့တာပဲ။ အိပ်မက်ထဲမှာဆို ခုထက်တောင် ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှား စရာကောင်းသေးတယ်.။ တကယ်လို့ သာလေ အဲဒီ အိပ်မက်ထဲမှာ လိုမျိုး ကျွန်တော် အိပ်မက်ထဲက အတိုင်း လိုက်မရှာချင်တော့ဘူး.။ အဲဒီ နောဧရဲ့ သင်္ဘောနဲ့ အတူ မမ ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်နိုင်မလားလို့ ကျွန်တော်ခပ်တည်တည် ပြောတော့ မမက တော်တော်လေး ရယ်လိုက်ပြီး ကောင်စုတ်လေး နင် လူလည်ပဲ ဟု ပြန်ပြောပါသည်.။ မှန်ပါသည်။ ကျွန်တော် လူလည်ကျခဲ့ပါသည်.။ သူမ အပေါ် ထားခဲ့သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို ယခုလို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်းသည်သာ သူမ ယခင်က ကြိုတင် ပညတ်ထားခဲ့သော အရာနှင့် လွတ်ကင်းပါလိမ့်မည်.။ သူမ စိတ်ဆိုး သွားပုံ မရပါ။ နှစ်လိုဖွယ်သာ ပြုံးပြပြီး ပြန်တော့မယ် ဟု စကားစ ဖြတ်ကာ ကျွန်တော့်ကို ကျောခိုင်း ထွက်ခွာသွားပါတော့သည်.။ ကျွန်တော်နှင့် မမကြားတွင် ထိုကဲ့သို့ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းသော နေ့ရက်များ အမှန်တကယ် သေသေချာချာ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်.။
အစကတော့ နေ့တိုင်းနီးပါး အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိခဲ့ကြသည်.။ နည်းနည်း ကြာတော့ တပတ်တခါ။ ခုတော့ တလ တခါ သာ အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ သူမ တဖြည်းဖြည်း ကန့်သတ် လာခဲ့ပါသည်.။ ကျွန်တော်က အဲလောက်ကြီးဆို မကြာလွန်းဘူးလား ဟု စောဒကတက်ကြည့်တော့ မင်းနဲ့ ငါ အတွက် အကောင်းဆုံးက ဒီတနည်းပဲ ရှိတယ် ဟု ပြောပါသည်.။ ဘာလို့လဲ ဟု မေးကြည့်တော့ လောကမှာ ကောင်မလေးတွေ အများကြီးပဲ တဲ့ ။ မင်းနဲ့ငါ အချိန်ကြာလို့ အနေဝေးတဲ့ အခါ တဖြည်းဖြည်း မင်း ငါ့ကို မေ့သွားမှာပါ ဟု စကားဆက်ပြောသည်.။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.၊ တစုံတယောက် အနေနဲ့ အဲဒီလို ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော့် အတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.။ဘာလို့လဲဆို ကျွန်တော့် အတွက် လောကကြီးထဲမှာ မမ တယောက်ပဲ ရှိနေလို့ပါ.။ နောက်ပြီး မမ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေ၊ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တော့မှ မနာကျင်စေချင်တဲ့ အကြောင်းတွေ မမ မေ့ပစ်ချင်တော့လို့လား.။စကားတွေ အများကြီး ပြောခဲ့ကြပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ ဝေးလွင့် သွားစေမယ့် အကြောင်းတွေ ဘာလို့ ပြောနေရတာလဲ ဟု ကျွန်တော် မေးတော့ သူမ ဘာမှ မဖြေဘဲ အခြားတဘက်သို့သာ မျက်နှာလွှဲကာ ရီဝေစွာ ထိုင်ငေးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်.။
မမ မည်သို့ တွေးနေမည်လဲ ကျွန်တော် မသိနိုင်ပါ။ မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ သူမကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရခြင်းအတွက် ဘယ်တော့မှ နောင်တ ရနေလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်းကိုတော့ သူမနှင့် တကွ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးကို သိစေချင်ပါသည်။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း သူမကို သတိရနေခြင်းများ အတွက် သူမ မည်သို့ နေမည်လဲ မသိပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်တော့ ကျေနပ်မိသည်။ သူမ အပေါ်ထားရှိအပ်သော မေတ္တာတရားများကို လောကကြီးထဲမှ မည့်သည့် အရာကမျှ ဟန့်တားနိုင်မည် မဟုတ် ဟု ယုံကြည်ထားသော ကျွန်တော့် အတွက်တော့ သူမ အပေါ် အမြဲတမ်း မျှော်လင့် နေလိမ့်ဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်ထိ ကျွန်တော့် မျှော်လင့်ချက်များကို ချိုးဖျက်မပစ်သေးသည့် သူမကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ရဦးမည်လား မပြောတတ်ပါ။
ဘဝဆိုသည်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် အသက်ရှင် နေထိုင်ကြရသည် ဟု ဆိုသော်လည်း ထိုမျှော်လင့်ခြင်းကို အနည်းနှင့် အများ တစုံတရာ ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရသင့်သည် ဟု ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော့် တည်ရှိခြင်းများ အတွက် သူမနှင့် အတူ ဘဝကို ရှင်သန် ဖြတ်သန်း သွားချင် နေမိသည်.။။ တကယ်တော့........။
သူ ကျွန်တော့်ကို...........။ ။